အာဇာနည် (၉)ဦးက ဘယ်သူတွေလဲ..? | Tachileik Online TV News
Home » TVNews , သတင်း » အာဇာနည် (၉)ဦးက ဘယ်သူတွေလဲ..?
Written By Tachileik News Agency on Sunday, 17 July 2016 | 05:34
ဇူလိုင်(၁၉)မှာ လုပ်ကြံမှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအ၀င် အာဇာနည်(၉)ဦး က ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘယ်အချိန်က လုပ်ကြံခံရတာလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ဘယ်အချိန်ကလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို တာချီလိတ်နေ ပြည်သူအချို့ကို မေးမြန်းထားပါတယ်။ သူတို့တွေက ဘယ်လိုတွေ ဖြေကြမလဲ ဆိုတာ.....
[ ဤအစီအစဉ်အား တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီမှ အပြုသဘောဆောင်၍ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ]
( ကာယကံရှင်များအား ခွင့်ပြုချက် တောင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ )
ဇူလိုငျ(၁၉)မှာ လုပျကွံမှုကွောငျ့ ကဆြုံးခဲ့ရတဲ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး အပါအဝငျ အာဇာနညျ(၉)ဦး က ဘယျသူတှလေဲ၊ ဘယျအခြိနျက လုပျကွံခံရတာလဲ၊ ဘယျနရောမှာလဲ၊ ဘယျအခြိနျကလဲ စတဲ့ မေးခှနျးတှကေို တာခြီလိတျနေ ပွညျသူအခြို့ကို မေးမွနျးထားပါတယျ။ သူတို့တှကေ ဘယျလိုတှေ ဖွကွမေလဲ ဆိုတာ.....
[ ဤအစီအစဉျအား တာခြီလိတျသတငျးအဂေငျြစီမှ အပွုသဘောဆောငျ၍ ရိုကျကူးတငျဆကျခွငျးသာဖွဈပါသညျ။ ]
( ကာယကံရှငျမြားအား ခှငျ့ပွုခကျြ တောငျးပွီး ဖွဈပါသညျ။ )